Ihe mgbako: Buo Kedu Otu Nyocha Gị Na Ntanetị Ga-emetụta Ahịa | Martech Zone
Wenezdee, Machị 31, 2021 Tọzdee, Eprel 1, 2021 Douglas Karr
Ihe mgbako a na-enye mmụba ma ọ bụ mbelata buru amụma na ahịa dabere na ọnụọgụ nke nyocha dị mma, nyocha na-adịghị mma, yana nyocha nyocha nke ụlọ ọrụ gị nwere n'ịntanetị.
Gbakọọ Ahịa Gị Ebu amụma Na-emetụta Site Nyocha Nyocha
Maka ozi gbasara etu esi mepụta usoro a, gụọ n'okpuru:
Usoro maka amụma ebuwanye ibu site na nyocha na ọnlaịnụ
Trustpilot bụ a B2B nyocha nyocha online maka ijide na ịkekọrịta nyocha ọha na eze nke ndị ahịa gị n'ịntanetị. Trustpilot achọpụtala na ule ndị ahịa ha na-egosi abawanye na ọnụego ntụgharị rue 60%. N'ezie, site na nyocha nke ndị ahịa 2,000, ha nwere onye mgbakọ na mwepụ na-emepụta usoro dị iche iche maka ịgbakọ mmụba ahịa nwere ike ịdaba na nyocha dị mma, nyocha na-adịghị mma, na nyocha ndị na-adịghị mma nke edozila.
Trustpilot chọrọ ịchọpụta etu nyocha si metụta ahịa, yabụ ha mere ndị ama ama William Cartridge Mahadum mgbakọ na mwepụ, William Hartston, iji mepụta usoro iji gbakọọ mmetụta akụ na ụba nke nyocha ịntanetị na azụmaahịa UK. Usoro bụ:
V = Onu ogugu onu ogugu na onu ahia gi site na ntaneti nyocha
P = Ọnụ ọgụgụ nke nyocha dị mma
N = Ọnụ ọgụgụ nke nyocha na-adịghị mma
R = Ọnụ ọgụgụ nke afọ ojuju kpebiri nyocha ndị na-adịghị mma
Nke a bụ vidiyo vidiyo na-ekwu maka uru nke nyocha dị n'ịntanetị:
Iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa bụ akụkụ dị mkpa nke ihe ọ bụla ịre ahịa, mana na-enweghị ndị ọrụ njedebe gị na-akọrọ n'ịntanetị ka atụmanya wee nwee ike nyocha ma jikọọ na ndị ahịa, atụmatụ ntụkwasị obi ndị ahịa gị ezughi oke. Iji otu ikpo okwu iji rụọ ọrụ nchịkọta, nchịkọta, na nkwalite nke nyocha ndị ahịa dị mkpa maka azụmaahịa na-ere n'ịntanetị.
Oge eruola ka ndị ahịa kwụsị ịtụ ụjọ nyocha dị n'ịntanetị wee malite ịghọta ike nke nzaghachi ndị ahịa n'eziokwu. Nyocha ndị a na-eme n'ịntanetị na-eme ka ndị ahịa nwee mmetụta na enwere ekele ma nụ, yana azụmaahịa na-ahụ ihe ngosi, ọdịiche pụtara ìhè na ROI, ego ha nwetara, njigide ndị ahịa, na ịpị ọnụego. Ọ bụrụ na azụmahịa gị emebeghị otu a, oge eruola.
Jan Vels Jensen, CMO nke Trustpilot
Nyocha ndị dị n'ịntanetị na-eme ka okporo ụzọ, ire ahịa, ibu ibu, ma belata mgbahapụ ụgbọ.
Budata Ọrụ Dị Nnọọ Aka nke Nyocha Na Internet Trust
Tags: mgbakoezi ndị ahịaahịa iguzosi ike n'ihe ahịanjigide ndị ahịanyocha ndị ahịadịkwuo ahịa na ntanetịonline mgbakonchịkọta nyocha na ntanetịnyocha nyocha nke ntanetiNyocha banyere ntanetịụgbọ ibu azụmahịantụkwasị obi
Mgbakọ na mgbakọ na mwepụ ebe a dị ka enweghị isi. Ihe atụ na vidiyo na-enye 120 nti, 20 adịghị mma, na 10 kpebiri nyocha na-adịghị mma. Ọ bụrụ na m tinye nọmba ndị ahụ na usoro dị n'elu, m ga-enweta 572.75 karịa 62.41% dị ka egosiri na vidiyo.
Ị ziri ezi, akwesịrị m imelite akụkọ a. Usoro bụ n'ezie V = 7.9 (.62P -.17N²+ .15R).
Jun 5, 2021 na 5:40 nke ụtụtụ
EwoO, post na-atọ ụtọ nke ukwuu. Echeghị na enwere igwe mgbako na-ebu amụma ire na nyocha ọnlaịnụ. Daalụ maka ịkekọrịta. Ana m agbakọ na akara m bụ: 1620.53%. Kedu ihe bụ echiche gị na akara ahịa m?
Chaị! Nke ahụ ga-abụ mwụli elu na ekele maka nyocha gị.